अबिबाहित बलिउड सुपरस्टार सलमानको सेखापछि कस्ले लैजाने हो ५ हजार करोडको यो सम्पत्ति ? कसैलाई थाहै नदिई सम्पत्तिको वारेस तोकेका रहेछन् – OSNepal
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानमा हजारौं युवती मर्ने गरेका छन् । तर सलमान खान भने बिहे गर्ने मुडमा छैनन् । तर सल्लु भाईका फ्यानहरु उनीहरुको बिहेको प्रतिक्षामा छन् । सलमानको विवाहलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिन कुनै न कुनै खबर आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, सल्लु भाइका फ्यान र केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उनको सच्चा प्रेम अरु कोही नभई ऐश्वर्या राय नै भएको विश्वास गर्छन्।
जससँग एक समय भाइजानको अफेयरको खबरले बजार तातेको थियो । मानिसहरु भन्छन् कि सलमान खान आफ्नो पहिलो प्रेम पूरा गर्न नसकेका कारण आज सम्म ब्याचलर नै छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ कि उनीहरु गएपछि उनीहरुको सम्पत्तिको मालिक को बन्छ ? यही कुरा आज हामी तपाईलाई बताउन गइरहेका छौँ । बलिउड मेगास्टार अमिताभ बच्चन पछि उनको सम्पत्ति उनका छोरा अभिषेक बच्चनले पाउनेछन्।
यसबाहेक जसका सन्तान छैनन्, उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नी श्रीमतीको नाममा राख्छन्, यस्तो गर्नेमा दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमारको नाम पनि पर्छन् जसको ७०० करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । उनकी श्रीमतीको नाम सायरा बानो हो । तर, सलमान खानले बिहे गरेका छैनन्, त्यसैले उनको सेखा पछि भने सम्पत्ति कसले पाउने ? सलमान खान यस्तो नाम हो जसलाई कुनै पहिचान चाहिदैन । उनले आफ्नो करियरमा धेरै हिट फिल्म दिए, जसले बक्स अफिसमा करोडौंको व्यापार गरेका छन् ।
तर, पछिल्लो समय भाइजानका फिल्मले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । तर भाइजानले धेरै हिट फिल्मबाट ५ हजार करोडभन्दा बढी कमाइ गरिसकेका छन् । सलमानका फ्यानहरु जान्न चाहन्छन् कि सलमान खानले किन बिहे गरेनन् ? के उनले पछि विवाह गर्नेछन् ? यदि उनले विवाह गरेनन् भने उनको नाममा रहेको करोडौको सम्पत्तिको मालिक को हुनेछ ? यी सबै कुराको जवाफ सलमानले दिए ।
हो, उनको पछि उनको सम्पत्ति कसले पाउँछ भन्ने निश्चित छ। उनले बिहे गरे या नगरे पनि आफ्नो मृत्यु पछि आधा सम्पत्ति ट्रस्टलाई दिइने र त्यसपछि सलमान खानले साँच्चिकै विवाह नगरे सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टलाई दिने बताए । यी सबै कुरा सलमान खानले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।